Asetenam Nsɛm: Yehowa Ahyira Me Asen Sɛnea Na Mehwɛ Kwan Koraa | Manfred Tonak
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | July 2019
KENKAN WƆ Abua Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Altai Alur American Sign Language Amharic Amis Angolan Sign Language Arabic Armenian Armenian (West) Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuukese Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Congolese Sign Language Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Esan Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Gitonga Gokana Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Iban Ibanag Ibinda Icelandic Idoma Igbo Igede Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Makhuwa-Meetto Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexican Sign Language Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Yehowa Ahyira Me Asen Sɛnea Na Mehwɛ Kwan Koraa
Manfred Tonak anom asɛm
‘ƐSƐ sɛ meyɛ akwampae adwuma. Nanso, akwampae adwuma betumi ama m’ani agye ni?’ Ná mintumi nhu. Ná m’ani gye adwuma a meyɛ wɔ Germany no ho. Ná mede nnuan kɔ mmeae pii wɔ Afrika. Mmeae no bi ne Dar es Salaam, Elisabethville, ne Asmara. Mannwen ho da sɛ daakye mede me bere nyinaa bɛsom Yehowa wɔ saa mmeae no ne mmeae foforo wɔ Afrika!
Awiei koraa no, bere a misii m’adwene pi na mifii akwampae adwuma ase no, minyaa hokwan bi a na menhwɛ kwan koraa. (Efe. 3:20) Nanso, ebia wubebisa sɛ ɛyɛɛ dɛn na ɛbaa saa? Ma minni kan nka me ho asɛm kakra nkyerɛ wo.
Bere a Wiase Ko II no fii ase afe 1939 no, abosome kakraa bi akyi na wɔwoo me wɔ Berlin, Germany. Bere a ɔko no reba awiei wɔ afe 1945 no, asraafo de wimhyɛn bɛtotoo atopae guu Berlin kurow no so. Bere bi a wɔde wimhyɛn retoto atopae no, wɔtoo bi too yɛn borɔn so. Nanso, me ne m’abusuafo guan kɔhyɛɛ beae bi a atopae ntumi nsɛe hɔ. Nea ɛbɛyɛ na yɛanya yɛn ti adidi mu no, akyiri yi, yeguan kɔɔ Erfurt; saa kurow no mu na wɔwoo me maame.
Me ne m’awofo ne me nuabea wɔ Germany, bɛyɛ 1950
Me maame hwehwɛɛ nokware no denneennen. Ɔkenkan nhoma ahorow a nyansapɛfo akyerɛw, na ɔyɛɛ ɔsom ahorow ho nhwehwɛmu, nanso n’ani annye emu biara ho. Bɛyɛ afe 1948 no, Yehowa Adansefo mmienu baa yɛn fie. Me maame ma wɔbaa mu, na obisabisaa wɔn nsɛm pii. Ɛno akyi no, annu dɔnhwerew baako na me maame ka kyerɛɛ me ne me nuabea kumaa sɛ, “Mahu nokware no!” Ɛno akyi bere tiaa bi no, me ne me maame, ne me nuabea no fii ase kɔɔ asafo nhyiam wɔ Erfurt.
Afe 1950 no, yɛsan kɔtenaa Berlin, na yɛkɔɔ Berlin-Kreuzberg Asafo mu. Bere a yetu fii baabi a yɛte kɔtenaa baabi foforo wɔ Berlin hɔ ara no, yɛkɔɔ Berlin-Tempelhof Asafo mu. Bere bi akyi no, me maame bɔɔ asu, nanso me de, metwentwɛn me nan ase. Adɛn nti na meyɛ saa?
SƐNEA MITUMI DII FƐRE SO
Esiane sɛ na mefɛre ade pa ara nti, na mintumi nyɛ pii wɔ Yehowa som mu. Ɛwom sɛ na mekɔ asɛnka de, nanso mammue m’ano anka asɛmpa no ankyerɛ obiara da; ɛkɔɔ so ara mfe mmienu. Akyiri yi, me ne anuanom mmarima ne mmea a na wɔatu wɔn ho ama Yehowa na wɔde akokoduru asom bɔe, na ɛno boaa me ma nneɛma kɔɔ yiye. Ná wɔn mu bi akɔda afiase wɔ Nasi nneduaban mu ne East Germany afiase. Afoforo nso de wɔn ahofadi too asiane mu wiawiaa wɔn ho de nhoma kɔɔ East Germany. Nea wɔyɛe no kaa me koma pa ara. Midwenee ho sɛ, sɛ anuanom yi de wɔn nkwa ne wɔn ahofadi too asiane mu esiane Yehowa ne wɔn nuanom nti a, ɛnde ɛsɛ sɛ me nso mebɔ mmɔden nya akokoduru.
Bere a mede me ho hyɛɛ asɛnka ɔsatu titiriw bi mu afe 1955 no, nkakrankakra midii sɛnea na mefɛre ade no so. Onua Nathan Knorr bɔɔ amanneɛ wɔ krataa bi a epuee Informant * mu sɛ, asɛnka ho ɔsatu akɛse pa ara a ahyehyɛde no ayɛ ho nhyehyɛe no, wei bɛyɛ mu baako. Ɔkaa sɛ, sɛ adawurubɔfo nyinaa de wɔn ho hyɛ mu a, “asɛnka adwuma a yɛbɛyɛ saa bosome no bɛyɛ nea ɛsen biara a yɛayɛ wɔ asase so pɛn.” Saa pɛpɛɛpɛ na ɛbae! Ɛno akyi no, ankyɛ na mihyiraa me ho so maa Yehowa, na me ne me papa ne me nuabea no bɔɔ asu afe 1956. Ɛno akyi bere tiaa bi no, na ɛsɛ sɛ misi gyinae foforo bi a ɛho hia.
Ná minim sɛ, ɛsɛ sɛ meyɛ akwampae adwuma, nanso mekɔɔ so tu hyɛɛ da mfe pii. Mewɔ Berlin no, meyɛɛ m’adwene sɛ medi kan asua sɛnea yɛtotɔ nneɛma kɔtɔn wɔ aman foforo so. Ɛno akyi no, na mepɛ sɛ mede nea masua no yɛ adwuma na mihu adwuma no mu yiye ansa na mayɛ akwampae adwuma. Enti afe 1961 no, mekɔyɛɛ adwuma wɔ Hamburg. Ɛyɛ kurow a po so hyɛn gyinabea a ɛwɔ hɔ no sõ sen po so hyɛn gyinabea biara a ɛwɔ Germany. M’ani gyee saa adwuma no ho araa ma mekɔɔ so tuu akwampae adwuma no hyɛɛ da. Ná dɛn na mɛyɛ?
Ɛyɛ me dɛ pa ara sɛ Yehowa maa anuanom a wɔwɔ ɔdɔ boaa me ma mihui sɛ Yehowa som ne ade a ɛho hia pa ara. Ná me nnamfo pii afi ase reyɛ akwampae adwuma, na wɔyɛɛ nhwɛso pa maa me. Onua Erich Mundt nso hyɛɛ me nkuran sɛ memfa me ho nto Yehowa so. Ná wada nneduaban mu pɛn. Ɔkaa sɛ, bere a wɔwɔ nneduaban mu no, anuanom a wɔde wɔn ho too wɔn ankasa ho so no, akyiri yi, wɔyɛɛ mmerɛw. Nanso, wɔn a wɔde wɔn ho too Yehowa so koraa no kɔɔ so dii nokware, na wɔbɛyɛɛ den wɔ asafo no mu.
Bere a mifii akwampae adwuma ase, 1963
Onua Martin Poetzinger a akyiri yi ɔbɛyɛɛ Akwankyerɛ Kuw no muni no nso kɔɔ so hyɛɛ anuanom nkuran sɛ, “Agyapade a ɛsom bo pa ara ne sɛ wubenya akokoduru!” Bere a midwennwen saa asɛm yi ho no, migyaee adwuma a na meyɛ no, na mifii akwampae adwuma ase June 1963. Ɛno ne gyinae a eye sen biara a misii! Abosome mmienu akyi, ansa na mɛhwehwɛ adwuma foforo mpo no, wɔtoo nsa frɛɛ me sɛ menkɔyɛ ɔkwampaefo titiriw. Mfe kakra akyi no, Yehowa hyiraa me ma me nsa kaa biribi a na ɛsen nea na mehwɛ kwan koraa. Wɔtoo nsa frɛɛ me ma mekɔɔ Gilead Sukuu adesuakuw a ɛto so 44 no bi.
MINYAA ASUADE TITIRIW BI WƆ GILEAD
Asuade a ɛsen biara a minyae baako ne sɛ, “Baabi a wɔde wo akɔ sɛ kɔyɛ ɔsom adwuma no, mpere wo ho mfi hɔ.” Onua Nathan Knorr ne Onua Lyman Swingle hɔ titiriw na minyaa saa asuade no. Wɔhyɛɛ yɛn nkuran sɛ, sɛ nneɛma mu yɛ den sɛ dɛn mpo a, yɛnkɔ so nyɛ yɛn som adwuma no. Onua Knorr kaa sɛ: “Dɛn na wode w’adwene besi so? Efĩ, mmoawammoawa, ohia? Anaa wobɛhwɛ nnua, nhwiren, ne nkurɔfo a wɔn anim ayɛ sereserew no? Bɔ mmɔden sɛ wobɛdɔ nkurɔfo a wɔwɔ baabi a worekɔ no!” Da bi, bere a Onua Swingle reka nea enti a anuanom bi pere wɔn ho fi baabi a wɔde wɔn akɔ sɛ wɔnkɔyɛ ɔsom adwuma no, ne werɛ howee araa ma n’ani taataa nusu. Ogyaee kasa a na ɔrema no kosii sɛ otumi hyɛɛ ne ho so. Nea esii no kaa me koma pa ara, na misii me bo sɛ merenni Kristo anaa ne nuanom anokwafo no huammɔ da.—Mat. 25:40.
Me, Claude, ne Heinrich reyɛ asɛmpatrɛw adwuma wɔ Lubumbashi, Congo, 1967
Bere a wɔmaa yɛn baabi a yɛbɛkɔ akɔyɛ yɛn som adwuma no, anuanom a wɔyɛ adwuma wɔ Betel no bi bisaa yɛn baabi a yɛrekɔ. Wɔkaa biribi pa faa baabi a obiara kaa sɛ ɔrekɔ ho kosii sɛ mekaa sɛ merekɔ: “Congo (Kinshasa).” Wɔyɛɛ komm, na nea wɔkae ara ne sɛ: “Oo Congo! Ɛnde Yehowa nka wo ho!” Saa bere no, na asɛm a nsɛm ho amanneɛbɔfo ka fa Congo (Kinshasa) ho ara ne sɛ, ɛyɛ ɔman a ɔko ne akunkumakunkum rekɔ so wɔ hɔ. Nanso, mamma me werɛ amfi asuade a na manya wɔ Gilead no. Bere a yewiee sukuu September 1967 akyi bere tiaa bi no, me ne Heinrich Dehnbostel, ne Claude Lindsay siim kɔɔ Kinshasa a ɛyɛ Congo ahenkurow no mu.
BAABI A YENYAA NTETEE PA SƐ ASƐMPATRƐWFO
Bere a yeduu Kinshasa no, yɛde abosome mmiɛnsa suaa France kasa. Ɛno akyi no, yɛde wimhyɛn kɔɔ Lubumbashi; kan no na wɔfrɛ hɔ Elisabethville. Ɛbɛn Congo ne Zambia hye so wɔ anafo fam. Asɛmpatrɛwfo fie a ɛwɔ kurow no mfinimfini no, ɛhɔ na yɛkɔtenae.
Esiane sɛ na obiara nkaa asɛmpa no wɔ Lubumbashi fã kɛse no ara nti, yɛn ani gyei sɛ yɛn na yedii kan kaa nokware no ho asɛm kyerɛɛ ɛhɔfo pii. Ankyɛ koraa na yenyaa Bible asuafo pii, na na yennya bere ne wɔn nyinaa nsua ade. Yedii aban adwumayɛfo anaa polisifo nso adanse. Ná wɔn mu pii wɔ obu kɛse ma Onyankopɔn Asɛm ne asɛnka adwuma a yɛreyɛ no. Ná Swahili ne kasa titiriw a nkurɔfo a wɔwɔ hɔ no ka. Enti, me ne Claude Lindsay suaa saa kasa no nso. Ɛno akyi bere tiaa bi no, wɔde yɛn kɔɔ asafo bi a emufo ka Swahili kasa mu.
Ɛwom sɛ yenyaa osuahu pii a ɛhyɛ nkuran de, nanso yehyiaa ɔhaw ahorow nso. Ná yɛtaa hyia asraafo a wokurakura atuo a wɔawe nsa abow anaa polisifo a wɔhaw adwene a wɔka sɛ yɛayɛ nneɛma bi a yɛnyɛe. Da bi, bere a na yɛreyɛ asafo nhyiam wɔ asɛmpatrɛwfo fie hɔ no, polisifo pii a wokurakura atuo baa hɔ. Wɔde yɛn kɔɔ polisifo adwumayɛbea kɛse mu. Wɔma yɛtenaa fam kosii bɛyɛ anadwo nnɔn du ansa na wɔregyae yɛn.
Afe 1969 no, wɔma mekɔyɛɛ ɔhwɛfo kwantufo adwuma. Saa ɔmansin no a mesomee no ma mekɔfaa Afrika sare mu. Menantew twaa kwantenten a ɛso yɛ atɛkyɛ faa sare ɛyɛ atenten mu. Akuraa baako ase no, na akokɔbaatan bi ne ne mma da mpa a meda so no ase. Ná akokɔbaatan no yɛ dede nyan me bere a na ade nnya nkyee. Wei yɛ biribi a me werɛ remfi da. Ná me ne anuanom tena gya ho anadwo bɔ nokware a ɛwɔ Bible mu ho nkɔmmɔ; sɛ mekae a na m’ani agye pa ara.
Ná yɛn haw kɛse baako pa ara ne nkurɔfo a na wɔayɛ wɔn ho sɛ wɔyɛ anuanom, nanso na wɔyɛ kuw bi a wɔfrɛ no Kitawala mufo. * Wɔn mu binom wiawiaa wɔn ho baa asafo no mu; ebinom mpo bɛyɛɛ asafo mu mpanyimfo. Saa nkurɔfo a na wɔte sɛ “abotan a ahintaw” wɔ asafo no mu no antumi annaadaa anuanom mmarima ne mmea anokwafo no. (Yuda 12) Awiei koraa no, Yehowa yii saa nkurɔfo no fii asafo no mu. Ɛno akyi no, nnipa pii baa asafo no mu.
Afe 1971 no, wɔma mekɔyɛɛ adwuma wɔ Kinshasa Betel. Ɛhɔ no, na meboa ma yɛyɛ nkrataa a asafo no de mena ne nea asafo no nsa ka ho adwuma. Afei nso, na meboa ma yɛyɛ nhoma a anuanom kra ho adwuma, na adwuma a wɔyɛ wɔ Ɔsom Dwumadibea nso, na meboa. Congo yɛ ɔman kɛse a na ɛhɔnom akwan, akwantu, nkitahodi, ne asetenam nneɛma foforo a ɛho hia nkɔ yiye. Wei nyinaa akyi no, bere a mewɔ Betel no, misuaa sɛnea mɛyɛ asɛnka adwuma no ho nhyehyɛe wɔ ɔman kɛse a ɛte saa mu. Ɛtɔ da a, na nkrataa a yɛde fa wimhyɛn de mena asafo ahorow no di abosome pii ansa na anuanom nsa aka. Ná woyi nkrataa no fi wimhyɛn mu de gu nsuhyɛn mu. Ná nsubɔnten mu nwura tumi kyere nsuhyɛn no ma edi nnawɔtwe pii wɔ nsu so. Nanso, ɛmfa ho ɔhaw ahorow yi ne ɔhaw afoforo no, yetumi yɛɛ adwuma no.
Ɛwom sɛ na yenni sika pii de, nanso anuanom yɛɛ nhyiam akɛse ma ɛyɛɛ me nwonwa. Wosiesiee mfɔte siw de yɛɛ asɛnka agua, wɔnwenee sare atenten de yɛɛ afasu, na wɔkyekyeree bi de yɛɛ nkongua. Wɔde mpampuro gyinaa apata no, wɔnwenee mmɛw de yɛɛ kɛtɛ kuruu so, na wɔde kɛtɛ no bi sɛw apon so. Ná wonni nnadewa, enti wɔwaawaee nnua abona kyekyeree apata no. Sɛnea anuanom mmarima ne mmea no faa nyansakwan so na wɔyɛɛ nsi no maa m’ani gyee wɔn ho yiye. Ɛmaa ɔdɔ a mewɔ ma wɔn mu yɛ den pa ara. Bere a wɔma mekɔɔ ɔman foforo so no, m’ani gyinaa wɔn pa ara!
ƆSOM ADWUMA A MEYƐE WƆ KENYA
Afe 1974 no, woyii me kɔɔ Nairobi Betel wɔ Kenya. Ná yɛwɔ adwuma pii yɛ, efisɛ na Kenya Betel na ɛhwɛ asɛnka adwuma a aman du a ɛbɛn hɔ yɛ no so. Saa aman no bi wɔ hɔ a, na wɔabara yɛn som adwuma no. Wɔmaa me kɔsraa anuanom a wɔwɔ saa aman no so mpɛn pii, titiriw Ethiopia. Ná wɔretaa yɛn nuanom a wɔwɔ hɔ no, na wɔfaa sɔhwɛ ahorow a emu yɛ den mu. Wɔyɛɛ wɔn mu bebree ayayade pii, na wɔde ebinom guu afiase; wokum ebinom mpo. Nanso, anuanom de nokwaredi gyinaa ɔtaa no ano, efisɛ na wɔne Yehowa ne wɔn nuanom ntam yɛ kama.
Afe 1980 no, anigyesɛm bi sii m’asetena mu. Mewaree Gail Matheson. Gail fi Canada, na na me ne no nyinaa wɔ Gilead adesuakuw baako mu. Ná me ne no di nkrataakyerɛw. Ná Gail reyɛ asɛmpatrɛw adwuma wɔ Bolivia. Mfe 12 akyi no, yɛsan hyiae wɔ New York. Ɛno akyi bere tiaa bi no, yɛwaree wɔ Kenya. Gail de Yehowa adwene na esusuw nneɛma ho bere nyinaa, na ɔma n’ani sɔ nea ɔwɔ. Ɛno ma m’ani gye ne ho pa ara. Ɔda so ara yɛ me hokafo a ɔboa me yiye, na ɔdɔ me.
Afe 1986 no, wɔmaa me ne Gail kɔyɛɛ akwantu adwuma, na bere koro no ara na meka Baa Boayikuw no ho. Aman a na yɛyɛ akwantu adwuma no wɔ so no, na pii ka aman a Kenya Betel hwɛ wɔn asɛnka adwuma so no ho.
Merema ɔkasa wɔ ɔmantam nhyiam ase wɔ Asmara, 1992
Mekae sɛnea meyɛɛ ɔmantam nhyiam bi a yɛyɛe wɔ Asmara (wɔ Eritrea) afe 1992 no ho nhyehyɛe a, na m’ani agye. Saa bere no, na wɔmmaraa yɛn som adwuma no wɔ ɔman no mu. Awerɛhosɛm ne sɛ, baabi a yenyae a na yebetumi ayɛ nhyiam no yɛ adekoradan bi. Ná ɔdan no nye, na sɛ wuwura mu de a, ɛnde na asɛm no asɛe koraa. Ɛda a yɛyɛɛ nhyiam no, anuanom siesiee ɔdan no mu ma ɛhɔ yɛɛ fɛ ma ɛyɛɛ baabi a ɛfata sɛ yɛsom Yehowa; ɛyɛɛ me nwonwa pa ara. Mmusua pii de ntama a wɔadi adwini a ɛyɛ fɛ agu mu bae bɛkataa biribiara a ɛnyɛ fɛ wɔ ɔdan no mu so. Ɔmantam nhyiam a yɛyɛe no maa yɛn ani gyei pa ara, na atiefo 1,279 na wɔbaa ase.
Ná akwantu adwuma no yɛ ade foforo koraa ma yɛn efisɛ nnawɔtwe biara na yɛsesa yɛn dabere. Bere bi, yɛtenaa ofie kɛse fɛfɛ bi a ɛbɛn mpoano mu; bere foforo nso yɛtenaa nnadedan bi mu wɔ adwumayɛfo atenae bi. Efi baabi a yɛtenae rekɔ baabi a yegyaw yɛn anan no, na yetwa kwan a ne tenten bɛboro anammɔn 300 (mita 100). Nanso, ɛmfa ho baabi a yɛsomee biara no, nea yɛkae a ɛma yɛn ani gye pa ara ne akwampaefo ne adawurubɔfo a wɔyɛ nsi a yɛne wɔn yɛɛ asɛnka adwuma no. Bere a wɔma yɛkɔsomee wɔ ɔman foforo so no, yegyaw yɛn nnamfo pa bebree hɔ, na yɛn ani gyinaa wɔn pa ara.
YENYAA NHYIRA PII WƆ ETHIOPIA
Efi afe 1987 kosi afe 1992 no, aman a na Kenya Betel hwɛ wɔn asɛnka adwuma so no, emu pii nyaa hokwan de wɔn som adwuma no hyɛɛ mmara ase. Ɛno nti, wɔtew baa dwumadibea ne boayikuw ahorow a ɛhwɛ ɔman bi som adwuma so. Afe 1993 no, wɔde yɛn kɔɔ yɛn adwumayɛbea a ɛwɔ Addis Ababa, Ethiopia. Anuanom a wɔwɔ hɔ yɛɛ asɛnka adwuma no wɔ sum ase mfe pii, nanso afei de na wɔagye yɛn atom wɔ mmara mu.
Yɛreyɛ akwantu adwuma wɔ Ethiopia nkuraa ase, 1996
Yehowa ahyira ɔsom adwuma no so wɔ Ethiopia. Anuanom mmarima ne mmea pii yɛɛ akwampae adwuma. Efi afe 2012 no, afe biara, wuyi adawurubɔfo a wɔwɔ ɔman no mu ɔha biara a, emu 20 yɛ daa akwampae adwuma. Afei nso, wɔayɛ teokrase sukuu ahorow ma wɔde ntetee ama anuanom, na wɔasisi Ahenni Asa bɛboro 120. Afe 2004 no, Betel abusua no tu kɔɔ ɔdan foforo bi mu, na Nhyiam Asa a wɔasi wɔ baabi a Betel wɔ no nso aboa pa ara.
Ɛnnɛ ne nnɛ nyinaa, adamfofa a ɛwɔ me ne Gail ne yɛn nuanom a wɔwɔ Ethiopia ntam no mu yɛ den, na yɛn ani sɔ pa ara. Yɛdɔ wɔn pa ara, efisɛ wɔn yam ye, na wɔwɔ ɔdɔ. Yare reteetee yɛn nnansa yi, enti ama wɔde yɛn kɔ Central Europe Betel. Anuanom ayi wɔn yam rehwɛ yɛn wɔ hɔ, nanso yɛn ani agyina yɛn nnamfo a wɔda yɛn koma so a wɔwɔ Ethiopia no pa ara.
YEHOWA NA ƆMA ENYINII
Yɛahu sɛnea Yehowa ama n’adwuma no anyin. (1 Kor. 3:6, 9) Ɛho nhwɛso ni. Bere a edi kan a midii Rwanda adwumayɛfo a na wɔaba Congo rebetu kɔbere adanse no, na ɔdawurubɔfo biara nni Rwanda a obu asɛnka adwuma no ho akontaa. Ɛnnɛ, anuanom mmarima ne mmea bɛboro 30,000 na wɔwɔ saa man no mu. Afe 1967 no, na adawurubɔfo a wɔwɔ Congo (Kinshasa) bɛyɛ 6,000. Ɛnnɛ, adawurubɔfo a wɔwɔ hɔ bɛyɛ 230,000, na nnipa bɛboro ɔpepem baako na wɔbaa Nkaedi a yɛyɛɛ no afe 2018 no. Aman a bere bi na Kenya Betel hwɛ wɔn asɛnka adwuma so no, adawurubɔfo a wɔwɔ hɔ nyinaa dodow akɔ anim ma wɔboro 100,000.
Bɛboro mfe 50 a atwam no, Yehowa maa anuanom binom boaa me ma mifii bere nyinaa som adwuma ase. Ɛwom sɛ meda so ara fɛre ade de, nanso masua sɛ mede me ho bɛto Yehowa so koraa. Osuahu a manya wɔ Afrika no aboa me ama manya abotare ne abotɔyam. Me ne Gail ani sɔ anuanom adɔfo a wɔdaa ahɔhoyɛ soronko adi kyerɛɛ yɛn, wɔfaa ɔhaw a emu yɛ den mu, na wɔde wɔn ho too Yehowa so no. M’ani sɔ sɛnea Yehowa adom me no pa ara. Nokwasɛm ne sɛ, Yehowa ahyira me asen sɛnea na mehwɛ kwan koraa.​—Dw. 37:4.
^ nky. 11 Akyiri yi, yɛfrɛɛ no Yɛn Ahenni Som, na seesei yɛde Kristofo Abrabɔ Ne Yɛn Asɛnka—Adesua Nhoma no na asi ananmu.
^ nky. 23 “Kitawala” yɛ Swahili kasa a ɛkyerɛ “sɛ́ wobɛhyɛ obi so, wobɛma no akwankyerɛ, anaa wubedi no so tumi.” Ná wɔde saa kuw no yɛ amanyɔsɛm; na wɔpɛ sɛ wonya fahodi fi Belgium nsam. Kitawala akuw no nsa kaa Yehowa Adansefo nhoma, wosuae, na wɔkyekyɛɛ bi. Adwene a na wokura wɔ amanyɔsɛm ho, wɔn amammerɛ a na egyina gyidihunu so, ne ɔbrasɛe ho adwene a na wɔwɔ no, wokyinkyim Bible nkyerɛkyerɛ de foaa so.
Share Share Yehowa Ahyira Me Asen Sɛnea Na Mehwɛ Kwan Koraa
w19 July kr. 25-29
Siesie Wo Ho Nnɛ Ma Ɔtaa
Wɔbara Yɛn a, Kɔ So Som Yehowa
‘Monkɔ Nkɔyɛ Asuafo’
Sɛnea Yɛbɛka Asɛmpa No Ama Aka Nkurɔfo a Wonni Ɔsom Biara Mu Koma
ASETENAM NSƐM Yehowa Ahyira Me Asen Sɛnea Na Mehwɛ Kwan Koraa
Ɛyɛ Ampa Sɛ Yesu Wu Maa Me?
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM July 2019
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM July 2019
Share Share ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM July 2019
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM July 2019